जंगबहादुर राणाको कहाली लाग्दो इतिहास - Kantipath.com
जंगबहादुर राणाको कहाली लाग्दो इतिहास
ममा माथवरसिंह थापा गोली हानी मार्ने जंगबहादुर कुँवरले नेपाल दरबारबाट निम्न प्रकारका शिक्षा पाए –
गगन सिं दरवारका एक प्रभावशाली पात्र थिए । रानी राज्य लक्ष्मीले उनलाइ धेरै माया अनि विश्वास गर्थिन । दरबारमा रानी र गगन सिंको प्रेम थियो भन्ने गाइगुइ हल्ला पनि थियो । रानी र गगन सिंविचको हेलमेल राजा राजेन्द्र अनि युवराज सुरेन्द्रलाइ मन परेको थिएन तथापी राजा राजेन्द्र राजकाजमा खास मतलब नराख्ने खालका पनि थिए । सुरेन्द्र र जंग बहादुर विच निकै राम्रो अनि गहिरो सम्बन्ध थियो । गगन सिं यसर्थले पनि जंगबहादुरसँग राम्रो सम्बन्ध नराखेको आकलन गर्न सकिन्छ । औपन्यासिक आधारमा भने यसबारे उपन्यासकार डाइमन सम्शेरले गगन सिं को हत्या राजा राजेन्द्र सुरेन्द्रको सल्लाहा बमोजिम जंगबहादुरले नै गगन सिंको हत्या गरेको उल्लेख गरेका छन । यसबाट रानी लगभग पागल जस्तै भएकी थिइन । निजको हत्यारा पत्ता लगाउन गरेको सभामै कोत पर्व हुन गयो र अन्तत गगन सिं जंगबहादु उदयको समेत कारक तत्व बन्न पुगे । यी कुराहरुको अध्ययन गर्दा जंग बहादुर र गगन सिं विच प्रतिसपर्धीको संबन्ध रहेको आकलन गर्न सकिन्छ ।
प्रारम्भमा जंगबहादुरकै गोल बैठकमा यो पाश्चात्य शिक्षाको श्री गणेश भएको कारण पछिबाट नेपालको पाश्चात्य ढर्राको माध्यमिक शिक्षण संस्थाको प्रथम नाम नै ‘दरबार हाइस्कूल’ पर्न गयो। तीनताका राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको निवास थापाथलीमा थियो र ‘थापाथली दरवार’ कहिन्थ्यो। सोही दरबारमा रहेको उनको भव्य गोलबैठकमा अङ्ग्रेजी शिक्षक मास्टर क्यानिंगले उनका छोराहरूलाई पाश्चात्य शिक्षा दिन थालेपछि विधिवत नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको जग बस्यो। यो वि.सं. १९९१ सालको कुरा थियो। शुरुका जंगबहादुरका छोराहरूले मात्र पढ्ने यस गोलबैठक शिक्षामा क्रमशः उनका भाइ, भतिजाहरू पनि संलग्न हुन थाले। त्यसैगरी क्रमशः दरबारिया भाइ भारदारका छोराहरूले पनि यसमा पढ्ने छुट पाउँदै गए। अन्ततः द्वितीय राणा प्रधानमन्त्री रणोद्विपसिंह का पालामा वि.सं. १९४८ मा उक्त गोल बैठकमा हुने पाश्चात्य पढाइ कार्यका लागि रानी पोखरीको पश्चिमतर्फ एक पृथक भवन बनाई उक्त पठनपाठन कार्य त्यही स्थानान्तरण गरेपछि नै नेपालमा औपचारिक ढङ्गले माध्यमिक स्तरको पाश्चात्य शिक्षाको प्रादुर्भाव हुन सकेको हो। जो हालसम्म भानु माध्यमिक विद्यालयतर्फ दरबार हाइस्कूलका रूपमा जीर्ण र मरणासन्न अवस्थामा नेपालको राजधानी काठमाडौंको मुटु रानी पोखरीमा यथास्थान आफ्नो अन्तिम सास फेर्दैछ।
Previous Previous post: बस दुर्घटना अपडेट : देउराली बजारबाट बस छुट्दा ३४ जना यात्रु थिए : प्रहरी
Next Next post: कर्मचारीले तलब नपाउँदा दुई सातादेखि खानेपानी बन्द